Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Jordi Alba Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha; "Moto GP". Anyị Jordi Alba Child Akụkọ na Ejighị Akwụkwọ Akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru ezu nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ndị na-amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ya na-eji ọsọ ọsọ na ume aka ngwa ngwa. Otú ọ dị, ọ bụ naanị aka ole na ole maara banyere Jordi Alba's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Jordi Alba Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ndụ mbido
A mụrụ Jordi Alba Ramos na 21st ụbọchị Mach 1989 na L'Hospitalet, Spain. A mụrụ ya na agbụrụ Catalan na nne ya, Maria Jose na nna, Alba Miguel.
N'ịbụ onye a mụrụ ma na-eri nri na obodo nke abụọ kachasị na Barcelona, ​​ọ bụ nnukwu ohere ịme egwuregwu dịka ntụrụndụ maka obodo a mara karịa football karịa ihe ọ bụla ọzọ. Little Jordi tolitere na nwanne ya nwoke bụ David Alba n'òtù L'Hospitalet nke Barcelona.
N'ịbụ onye na-etolite, ọ gụrụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị dị na Barcelona nke Spanish nke nyere ya ohere jiri obi ụtọ na-egwu bọl asọmpi n'oge oge egwuregwu. Mgbe ọ dị afọ 7 n'afọ 1996, ezinụlọ Jordi Alba kpebiri ime ka nwa ha soro football dị ka ọrụ. N'afọ ahụ, obere oge Jordi Alba malitere njem njem ya na Catalonia nwa klas Hospitalense. E weere ya dịka onye kasị nta, onye obi ike na onyeisi ndị agha ya dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a.
N'ịbụ ndị nwere ọdịnala na-ewu ewu nke ịhapụ ndị kacha mma ha na-aga Le Masia (FC Barcelona Youth Football Club), Hospitalense enweghị ike ịla azụ ka onye ọkpụkpọ kpụrụ isi maka ule. Jordi Alba gara Lemasia agụmakwụkwọ football na olileanya zuru oke. N'agbanyeghị ntakịrị ntakịrị bụ nke bụ njedebe, Jordi gosipụtara ọnye na-egbuke egbuke nke nwara nwata ahụ na-eto eto ka ọ nakwere ya na-enwe olileanya na ọ ga-eto ogologo n'afọ ndị na-abịanụ.
Alba n'ezie ọrụ ya na-eto eto na ọkwa nke Barcelona dị ka onye aka ekpe. Ọ na-enwe obi ụtọ n'oge mbụ na ụlọ ọgbakọ ahụ. Otu n'ime oge ncheta ya na-agụnye ya inwe nri abalị na mbụ onyeisi ndị isi FC Barcelona, Louis Van Gaal. Dị ka e gosipụtara na foto dị n'okpuru ebe a, ha abụọ nọdụrụ na tebụl na-ekwurịta okwu kacha mma nke Jordi na football.
Jordi Alba Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Iche Ihe Isi Ike na Ịmalite Ikike
Inwe oke mmepe nke mmepe ma merie ya Louis Van Gaal ekwenyeghị na ihu ọma na ụlọ akwụkwọ dị na Barcelona na Le Masia. Jordi Alba nwere otu nnukwu nsogbu. Eziokwu ahụ bụ na ọ nọ "Obere obere". Ọ bụ ezie na ndị ibe ya toro ogologo oge na afọ ndụ ha, ụda Jordi dara mbà. Nke a mere ka arụmụka dị arọ n'etiti Barça Infantil B na-arụ ọrụ ọbụna gị Lionel Messi a gbaghaara ya. Na 2005, Barcelona wepụtara Jordi Alba maka ịbụ ndị e weere "Obere obere ma dị mkpa". Ha amaghị na ọ ga-apụta na FIFA ụwa cup 5 afọ mgbe e mesịrị. Ọ dị mkpa iji mara nke ahụ Jamie Vardy nwetakwara otu ihe a dika ndi ntoro ntorobịa.
N'ihi obi ụtọ sitere n'aka nne na nna ya na nwanne ya nwoke okenye, obere oge Jordi gara n'ihu. Ọ bụ ọgbakọ Cornellà nke ụlọ ya nabatara ya. Jordi Alba kpaliri mkpali site na ihe mgbu ya ma nweta obi iru ala na ndi otu ya. A na-ejikọta oge na-eme ihe ngwa ngwa ngwa ngwa na ọtụtụ ngosipụta dị ngwa. Utu ke akpatre ama adaha ada ye ini emi Jordi okosiode enyịn̄ emi "MotoGP"
Mgbe afọ abụọ nke hụrụ na ọ na-eto ogologo, FC Valencia kpebiri ịkwụ ụgwọ n'aka ekpe maka ego nke € 6,000. Ọ bụ na Valencia Jordi Alba mesịrị mechaa ọrụ ntorobịa ya mgbe o nyere ndị ntorobịa ya aka inweta nkwalite na Division Tercera.
Alba mere ọkachamara ọkachamara ya na oge 2008 / 2009. Ihe omume ya pụtara ìhè na 2010 FIFA World Cup mechara dọta FC Barcelona bụ onye mbụ rịọrọ maka ebere na mgbaghara. Jordi Alba gbaghaara ụlọ klọb ya ma soro ha na 2012. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Jordi Alba Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Football bụ osisi ọlaedo, ebe Jordi Alba n'oge ọ bụ nwata nwere ndò na Ya mere, obi ụtọ na-eme ka ọ bụrụ onye ukwu. Ugbu a, bna akwa Spaniard a biara na-agbanye anya ya n'obi ya.
Malite, Jordi Alba na 2009 (N'afọ ahụ, ọ banyere òtù U20 Spanish) malitere mmekọrịta ya na enyi nwanyị mbụ ya bụ Mellisa Morilas. Melissa, bụ onye ji ụbọchị 3 na-eme egwuregwu na ndị na-agba ọsọ bụ nwa akwụkwọ na ha zutere n'otu ụlọ nkwakọba egwu Valencia.
Nwa agbọghọ Spen ahụ na-atụgharị anya na-ejiri nlezianya na-ahụ Jordi ma na-elepụ anya anya nke ọzọ. Nke a site na itinye aka pụtara na ọ bụ onye na-ekwo ekworo. jordi ekwuola na o nwere iwe di oke ma mesoo ya dika o bu nwa ewu dika ihe a na-ahu site na foto di n'okpuru.
Mellisa kwuru na ọ na-ahụ Jordi ka o nwere ike "Ịbụ ndị dị umeala n'obi na ndị na-ahụ n'anya nke ukwuu n'aka ndị GIRLS". Ọ na-ekpughe na Spanish pịa na enyi ya nwoke bụ "Na nlekota onyunyo na nke oma na ndina". Ọhụụ Melisa nọgidere na-elegharị anya ka oge na-aga adịghị ada nke ọma na Jordi Alba. Nke a mere ka njedebe nke mmekọrịta ha ruo afọ anọ.
Na 2014, afọ nke FIFA ụwa iko, Jordi malitere mkpakọrịta nwoke na nwunye Romrey Ventura. A hụrụ ha n'ihu 2014 mana ha ekwughị na ha nwere nsogbu.
Romarey si Sevilla. Ọ bụ otu nwa akwụkwọ nke njem nleta na mahadum ma tinyekwa aka na ịme ihe nlereanya. Di na nwunye ahụ ejirila ọtụtụ foto kọwaa ọnụ (foto ndị mara mma) na oge ụfọdụ mgbe ha nụchara ka ha na-akpakọrịta.
Tụkwasị na nke ahụ, Romarey Ventura nwere mmekọrịta dị mma na nwanne Alba (nwunye Devid).
Oge ụfọdụ, ma Jordi na Romarey chọrọ igosi obi ụtọ ha na ndị Fans. Dịka ọ bụ na August 2017, Romarey Ventura dị ime na nwa mbụ ha. O tinyere foto na Instagram na Alba n'ime ya nke ọ na-emetụ ya afọ. "Juputara n'ọtutu ịhụnanya" o dere.
Ndị nne na nna nke Alba aghaghị inwe obi ụtọ n'ihi na nwanne ya nwoke bụ Devid na-atụ anya ka nwatakịrị na onye òtù ọlụlụ ya Carol n'otu oge ahụ. "Yiri ma ha zubere ya"
Jordi na Romarey nwere nwa mbụ ha bụ Piero na 18th nke January 2018.
Jordi Alba Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ezigbo Ndụ Onye
N'ajụjụ ọnụ nke Jordi Alba na Mundo Deportivo, ndị na-azaghachi azịza ajụjụ banyere ndụ ya. Ọmụmaatụ…Alba kwupụtara na ọ na-ehi ụra 12 awa n'ụbọchị!. N'okpuru bụ Q na A sessions.
Q: Kedu ihe Nwee ndụ gị na ụlọ ọrụ?
Jordi Alba azaghachi: "Ibi ndụ n'ebe ahụ, agara m sinima, ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa. Ana m aga ụlọ ihe nkiri "Joventut", ebe nne m hụrụ n'anya ".
Q: Ị bụ onye na-agba ume?
Jordi Alba azaghachi: "Enwere m mmasị n'ịkpọ ya na m na-eme ya na nna m. Ọ na-eme m ka m chee echiche, ọ bụ ya mere m ji chee na ọ dị mma na a na-akụziri akụ na ụzụ n'ụlọ akwụkwọ ".
Q: Ị na-ehi ụra 12 n'ezie?
Jordi Alba azaghachi: "Enwere m ike ihi ụra maka awa 12 ma ọ bụ 13. N'abalị m na-eme ya site na 12am ruo 9am ma enwere m oge nke 2,3 ma ọ bụ 4 awa n'ehihie "
Q: Ị bụ onye na-eme Salad?
Azịza Jordi Alba: "Salad na-eme ka m bụrụ onye nzuzu. Ana m eri ya maka nri ehihie na nri abalị ... Enweghị m ike isi nri ụtụtụ ma ana m enwe obi ụtọ na salad, ụfọdụ ọkụkọ na osikapa. Ana m aṅụ mmiri mmiri 3 lita n'ụbọchị ".
Ajụjụ: Ị bụ onye ụda egwu, ma eleghị anya Kevin Roldan?
Jordi Alba azaghachi: "Mmasba na" flamenco "amasị m. Kevin Roldan? Amaghị m onye ọ bụ "
Q: Ị hụrụ Television?
Jordi Alba azaghachi: "Enwere m mmasị na TV TV nke TV" La que se entreina ". Enwere m ike ile otu ihe ahụ ugboro ise ma ana m achị ọchị ".
N'ikpeazụ, na Jordi Alba Personal Life, a sịrị na ọ bụ onye nnọchianya nke Braun na-akwalite ngwaahịa ahụ. Ọ nwere ọtụtụ ụgbọ ala bara ụba gụnyere Audi.
Jordi Alba Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Onu nke Onye
Alba emeriwo ọtụtụ utu aha ụlọ na mba. Tupu oge 2017 / 2018, o nyeere FC Barcelona aka inweta La Liga na Copa del Rey ugboro anọ ọ bụla. O nwetara Supercopa de España ugboro abụọ na FIFA Club World Cup na 2015. More otú ahụ na Barcelona, ​​o nwetara ma UEFA Champions League na UEFA Super Cup na 2015. E wezụga ụlọ ọrụ klọb ya, ọ natara ọtụtụ akara aka ruo ugbu a. Ụfọdụ n'ime onyinye ndị a ma ama n'etiti ha bụ:
FIFPro World XI: Team nke abụọ , Team nke atọ [2013, 2014 na 2016]
UEFA Champions League: Team nke Season [2014-15]
La Liga: Egwuregwu nke Oge [2014-15]
Jordi Alba Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Style nke Play
Alba bụ onye a na-ahụkarị nke ọma na nke na-ebu ọsọ ọsọ nke nwere ike iji ya mee ihe dịka aka ekpe. Njere ya na ume ya na-enye ya ohere itinye aka na mmejọ abụọ ahụ ma na-agbachitere ya ka ọ nwere ike ịnweta site n'otu njedebe nke pitch ahụ na nke ọzọ ngwa ngwa.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Jordi Alba nke ụmụaka na akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.